Iifowuni ezininzi eziphakathi kuluhlu lweefowuni zeXiaomi ziya kufika ngescreen senswebi yeminwe kulo nyaka | I-Androidsis
El I-Mi 8 Pro kunye Ushicilelo lweMi 8 Explorer yayiziifowuni zokuqala zeXiaomi zokumilisela ngesikena sokubonisa iminwe. Ezi ziya kudityaniswa ngu Siyi9 kunye Ushicilelo lweMi 9 Explorer kwiintsuku ezimbalwa, kodwa kujongeka ngathi uphawu lokuvula luya kwenza indlela eya kuluhlu lweefowuni zeXiaomi kulo nyaka.
Olu lwazi luvela kumphathi weemveliso zeXiaomi, uWang Teng Thomas, otyhile iposti yeWeibo izolo ukuba injongo yakhe ye-2019 kukuzisa Umsebenzi weminwe "eskrinini" seemodeli eziphakathi.
Akukho lwazi malunga nokuba zeziphi iifowuni zeXiaomi ezizayo eziphakathi ziya kuba nale nkqubo yokuqaphela iminwe. I-Redmi 7 Pro, ekulindeleke ukuba iphehlelelwe kungekudala, iya kuba nesikena sayo somnwe ngasemva. Izixhobo esinokucinga ngazo ngoku zibandakanya I-MAX 4 yam, i-Mi 9 SE, i-Mi 9 Lite (ukuba ikho ekuphuhlisweni) kwaye mhlawumbi ezihlangwini ze 6X yam.
Ingxelo evela kuWang Teng Thomas
Esi sithuba sikwatyhile ukuba kutheni I-MIX 3, eyasungulwa ngo-Novemba, ayinaso iskena sokubonisa iminwe, ngelixa Hlonipha iMicrosoft 2, ekwayifowuni yokutyibilika, inayo. Isizathu, ngokukaMnu.Thomas, kungenxa yeyantlukwano kuyilo kunye nolwakhiwo lwesilayida kwiifowuni ezimbini. Uthe uza kunika inkcazo efanelekileyo kwiveki ezayo.
Inkampani ye-Mi 9, ethi izokwaziswa ngolwesithathu kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona, iya kubandakanya Isizukulwana esilandelayo kwisiboniso sokuprintwa kweminwe, eyi-25% ngokukhawuleza kunesizukulwana sokugqibela. Inendawo enkulu yokuskena kwaye ilungiselelwe ukusebenza kakuhle ngeminwe eyomileyo nakumaqondo obushushu asezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Igosa: UXiaomi uya kubheja ekuphunyezweni kwabafundi abakwi-screen zeminwe kwinqanaba eliphakathi kulo nyaka
Unxibelelwano olunye lwe-UI lufika kwi-Intanethi ye-Samsung, isikhangeli sophawu lwaseKorea